“Warshadda Laydhka Hargeysa Hanti-dhawr baa ku Jira, waxaana Soo Baxay khaladaad Badan” | Somaliland.Org
“Warshadda Laydhka Hargeysa Hanti-dhawr baa ku Jira, waxaana Soo Baxay khaladaad Badan”
January 9, 2013	Wasiirka Hawlaha Guud oo Ka hadlay Qodobadii u qabsoomay Kal-hore iyo Qorsheyaashooda sanadkan
Hargeysa (Somaliland.Org)-Wasiirka Wasaaradda hawlaha Guud iyo Guriyaynta Md. Axmed Cabdi Maxamuud (Xaabsade) ayaa ka hadlay khaladaad badan oo ka jira warshadda laydhka Hargeysa oo uu hanta-dhawrka guud oo baadhis ka wadaa dibada u soo saaray.
Wasiirku waxa kale oo uu sheegay inay rajaynayaan inay sanadkan warshadda laydhka Berbera awood u yeelato inay dabka gaadhsiiso dhamaan magaalo-xeebeeda Berbera iyo tuulooyinka ku gadaamanba. Wasiir Xaabsade waxa uu sidaasi ku sheegay waraysi khaas ah oo uu siiyay Wargeyska DAWAN. “Haddii aan idiinka waramo Warshada Laydhka ee magaalada Berbera intii wasaarada lagu soo wareejiyay hawlaheeddu aad ayay u fiican yihiin, waxaana noo qorshaysan in laydhka la gaadhsiiyo dhamaan magaalada Berbera iyo Tuulooyinka ku dhow dhow sida Dekeda, Haamaha Shidaalka iyo Madaarka,”ayuu yidhi Wasiirka hawlaha Guud.
Md. Xaabsade waxa kale oo uu ka hadlay hanti-dhawrka guud oo baadhis ka wada warshadda laydhka Hargeysa, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Warshada Laydhka Hargeysa waxa galay hanti dhawrkii, xisaabiyihii guud ayaa soo maray ilaa 19/11/2012 ilaa xiligana waxaa ku jira hanti dhawr, waxaa soo baxay waxyaabo badan oo khaladaad ah oo ku soo baxay raad raacii, waxaana aad noo caawiyay Hanti dhawrka oo si fiican u dabo galay sidii ay wax u socdeen.
Haddii ay tahay biilasha la soo ururinayo, haddii ay tahay dalacaadooda iyo xisaabaadka Baanka ee ay leedahay warshada leydhka Hargeysa iyo buugta taala xafiisyada warshada iyo dhamaan shaqaalihii arrimaha ku lug lahaa iyo matooradii shaqaynayay oo imika intii uu shidaal qaadan jiray aad uga yaraaday.” Wasiirka Hawlaha Guud oo hadalkiisa sii watay wuxuu intaasi ku daray “Guushaana waxaa iska leh hanti dhawrka oo gaadhay dhibaatooyinka taagan si fiicana u baadhaya dad badana shaqada ayaa laga joojiyay. Waxaan rajaynayaa in dhawaan hanta-dhawrka guud soo saari doono Natiijo.” Wasiir Axmed Xaabsade waxa kale oo uu tafaasiil ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay wasaaradaasi sanadkii tagay ee 2012-kii, waxaanu yidhi “Waxaanu dhisnay geerashkii weynaa ee dawlada dayactir balaadhan baana lagu sameeyay, waxaanu soo iibinay dhamaan qalabkii baabuurta Dawlada lagu dayactiri lahaa. waxaanu qoranay rag makaaniyiin ah oo baabuurta dawlada dayactira una shaqeeya sidii uu Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo nagu amray in gaadiidka dawlada dhexe lagu sameeyo sanadka 2013-ka geerashkaas.” Waxa kale oo uu wasiir Axmed Cabdi Xaabsade sheegay in wasaaradu ay dhamaan hay’adaha Dawlada ay ku wargalinayso in ay geerashkaa dawlada keenaan gaadiidka dhawaana ay wareegto ku soo saari doonaan. Wasiirka oo ka hadlayay qorsheyaasha sanadkan 2013 waxa uu yidhi “Waxa kale oo aanu sanadka cusub bilaabi doonaa in liisamada gaadiidka aanu bedalo oo ka dhigno laf adag, dareewaladana aanu baadhis adag marino si khasaaruhu inooga yaraado .”
Previous PostGolaha Guurtida Oo Ansixiyay Ajandaha kalfadhigooda 49-aadNext PostRabshado Saylac ka dhacay oo uu ku Naf-waayay hal qof tobaneeye kalena ku dhaawacmeen	Blog